रमा ओलि भन्नुहुन्छ : ११ जना बच्चाहरूलाई पुन पुष्पा अधिकारीको केयर बाल गृ’हमा ल्याएर छोडियोस ! सहि या गलत आफ्नो बिचार राख्नुहोस् । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
मेचिमहाकाकी खबर: एउटै बिसयमा पटक-पटक धेरै पटक बोल्ने समय छैन। हजारौं पि’डा ओ’झेलमा परेका छन। देशै ओ’झेलमा परेको छ। हो पुष्पा अधिकारी म्या’डमको ग’ल्ती नै छ। यसको छि’नोफानो होला नै।
तर ति ११ जना क’लीला भ’विष्यका क’र्णधार बालबा’लिकालाई आफु को हु र मेरो बा-आमा को हुन भन्ने कुरा केही थाहाँ छैन्। उनिहरुले बा’स पुष्पा अधिकारीले नै आफुलाई ज’न्म दिएको आमा ठा’न्छन् फेरी बर्षोदेखि ला|लन पा’लन पो’षण गर्दै,
आएकी पुष्पा अधि|कारीलाई पनि बा’च्चाहरू मा’थि पुरा हक अधि’कार हुन्छ नै, ति ११ जना बच्चा’हरूको हिंजो सम्म अनु’हारमा हाँसो थियो। आज एकाएक आँ’शुको खोलो ब’गाएर कहाँ लगिएको छ ? पत्रकारहरू जसरी हिजो लागि परेका थ्यौं
त्यही ढं’गले बच्चा’हरूको लागि क्या’मेरा उठाउ डल’रबादि नबन है । अनि कसले दियो यसरी अ’धिकार बच्चाहरू जान नचा’हँदा नचाहँदै जब’र्जस्ती गर्न यही स्व’तन्त्रता हो ? यही मा’नवता हो ? भ्र’ष्टेहरू लु’टपाट अनि’यमित्ता ह’त्या हिँ’सा जस्ता अप’राध निय’न्त्रण गर्न नसक्ने स’त्ताका साँढे चि’रञ्जिवी यता सुन है!
भोलि ति अबो’ध ११ जना ब’च्चाहरू बला’त्कृ’त भएको र सड’कमा छोडेको खबर हेट’लाईन नब’नोस् ला’जप’चेका नख’चराहरू सिधा कुरो यहीँ हो कि तुरु’न्त ति ११ जना बच्चाह’रूलाई पुन पुष्पा अधिकारीको केयर बाल गृ’हमा ल्याएर छोडि’योस्। #हेलो_सरकार
Previous झलनाथ खनाल भन्नुहुन्छ: प्रधानमन्त्री ओलिको प्रवृत्तिविरूद्ध लड्दै छौँ ! पूरा पढ्नुहोश!
Next पार्टी बिभाजन हुन्छ, तयारी अवस्थामा रहन झलनाथको कार्याकर्तालाई निर्देशन…हेर्नुहोस।